Somaliland Ma Qabyaalad-diid mise Qabiil-u-dood.by Maxamed jeex yoonis | Gabiley News Online
December 13, 2018 - Written by maxamed jeex
Waxaan rabaa in aan si deggan isula dhiraandhirinno buuqa ku furan nidaamka awood qaysiga dalka SL Buuqaasi waa qabyaalad diid, caddaalad doon ah oo u daneynaya danta guud iyo somalilandnimada ama waa buuq dadka wadaa ay doonayaan qabyaalad horseedi karta sadbursi oo ay iyaga wax ugu kordhayaan sida beesha Isaaq lana hubin in ay shaqeyn karto.
Waxaan rabaa in aan isla cabbirno arrinkaas mudada dheer ka tagnaa saami qaybsiga dalka JSL oo ay reerka isaaq kaligood ay isku kubeen kuraasta dalka ugu sareysa.
Dadka qaar waxay u qabaan dadka diiddani in ay yihiin dad qabiil diid ah, qaar kalena waxay u qabaan in ay iyagu wadaan qabyaalad weliba caddaalad darro ku saleysan taas oo ah reerkeygu waa in uu ka kuraas badnaadaa reeraha kale sida isaaqu ay doonayaan.
Labada midda ay tahay sidee lagu garan karaa? Halbeeg lagu kala ogaado ma la heli karaa? Sidaasi darteed somaliland iney kuraasta u qaybsadaan labo 50/50 isaaq iyo no isaaq taas ayaa imika xalka ugu dhow.
Anigu siyaasiga aan reerkiisa kuraastu u badaneyn haddii laga guuro, haddana diida ayaan u arkaa in uu yahay mid qabyaalad-diid ah. Midka ay reerkiisa kuraastu ugu badaneyso diidmada waxaan u arkaa qof u doodaya xaq uu u arko in uu reerkiisa ka maqan yahay sida beelaha Gadabuurssi oo ay ka maqanyihiin kuraas aad u farabadan.
Siyaasiinta beelaha isaaqna waa iney fahmaan in ay haystaan sadbursi aad u badan taasina waxay wax yeeleyneysaa qaranka JSL si taas looga badbaado waa iney isaaqu marka hore runta isku sheegaan kuraastana baneeyaan tussaana reerahooga iney haystaan kuraas xad dhaaf ah.
Maxamed jeex yoonis